'डा. केसीलाई प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मार्न चाहानुभएको छ' | Citizen Post News
'डा. केसीलाई प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मार्न चाहानुभएको छ'
२०७५ माघ १८ गते १८:१२
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘डाक्टर केसी जनताको माग लिएर अडिग भएर लड्नुभएको छ । उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ । तर, सरकारले यसमा कुनै चासो राखेको छैन्, बेवास्ता गर्याे ।’
नेता पौडेलले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार नगरेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौताको मूल विषय तोडमोड गरेर विद्येयक ल्याएको छ ।’ उनले डाक्टर केसीले समयमै आँखा नखोलिदिएको भए स्वास्थ्य शिक्षामा रहेको समस्या र विकृतिबारे कुनैपनि दलले यो काम गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘यसमा लजाउनुपर्ने कुनै कारण र विषय छैन् । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लागि कांग्रेस वा कम्युनिष्ट नाथे हुन, तर गोविन्द केसी सबथोक हुन् ।’
उनले गोविन्द केसीलाई कसैलेपनि अवमूल्यन गर्न नहुने धारणा राखे । उनले माथेमा आयोगको प्रवितेदन हुवहु लागु गर्नुपर्नेपनि जिकिर गरे । पौडेलले डाक्टर केसीलाई अनशन बसाउन लगाउने कांग्रेस नै हो र अब यसको अवतरणपनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेको कुराको खण्डन गरे । उनले भने,‘सरकार हिजो सरकारमा हुँदा डा. केसी ७ पटक अनशन बस्नुभएको छ । उहाँलाई कसरी कांग्रेसले अनशन बस्न लगायो ? यो गलत आरोप हो ।’
उनले आरोपै लगाउने हो भने डाक्टर केसीलाई प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मार्न चाहानुभएको छ भनेर आफूहरुले पनि आरोप लगाउन सक्ने तर्क गरे । उनले भने,‘डाक्टर केसीको ज्यान जोखिममा छ । खतरामा छ । उहाँको जीवनरक्षाको लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।’ नेपाल चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेलले सरकारले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘डाक्टर केसीको अनशन तोडाउन सरकारले उहाँलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । उहाँको जीवनरक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’
सरकार र केसी पक्ष दुवै वार्ताको लागि उदार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रमा उनले भने,‘अब पूर्वाग्रह, तुष, अहंकार र हठबाजी गर्नुहुँदैन् । दुवै पक्ष वार्ताको लागि लिवरल हुनुपर्छ । यतिबेला डा. केसीकै सत्याग्रहका कारण प्राप्त उपलब्धिको वकालतमा भन्दा सत्याग्रहीको ज्यान बचाउन सक्रिय हुनुपर्छ । ज्यान बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।’